Dr. Tint Swe's Writings: October 2016
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကရေးခဲ့တဲ့စာကို ဒေါ်စုခရီးစဉ်နဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ ပြန်တင်ပါရစေ။
နာဂါဆာကီဒေးကို ဘယ်တောမှ မမေ့ပါ။ ကျွန်တော်မမွေးခင် ၃ နှစ်တိတိ၊ ၁၉၄၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့မှာ ဂျပန်နိုင်ငံ နာဂါဆာကီမြို့ အနုမြူဗုံးချခံရတယ်။ လူပေါင်း ၃၈,ဝဝဝ ကနေ ၄ဝ,ဝဝဝ သေဆုံးရတယ်။ ၆-၈-၁၉၄၅ ဟီရိုရှီးမားမှာ လူ ၉ဝ,ဝဝဝ ကနေ ၁၄၆,ဝဝဝ သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ မြင်မြင်သမျှ ပြားချပ်ကုန်ပြီ။ အဲဒီနောက်မှာ ဂျပန်တွေ ဘာလုပ်ခဲ့ကြသလဲ။
ကမ္ဘာမှာ ချမ်းသာနေတဲ့နိုင်ငံတွေ ဘယ်လိုကနေဘယ်လို ချမ်းသာလာကြသလဲက စိတ်ဝင်စားဘို့ အလွန်ကောင်းတယ်။ အဲဒီမေးခွန်းကို ခပ်သောသောနဲ့ ဖြေခဲ့ဘူးတယ်။ အဲလိုချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံကလူတွေဟာ အရင်က ပင်လယ်ဓါးပြတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့။ ဒီစာမှာရေးချင်တာကတော့ ဂျပန်ဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ မရှုမလှ အရှုံးကြီးရှုံးခဲ့ရာကနေ ကနေ့မှာ ဘာလို့ချမ်းသာလာသလဲ။
ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ ငတ်မွတ်မှုထဲကနေ၊ ရတာရှိတာကိုစားပြီး ဗိုက်ဖြည့်ကြတယ်၊ အလုပ်လုပ်စရာမရှိချိန်မှာ မီးခိုးခေါင်းတိုင်ကနေ အငွေ့ထွက်သလို ဆေးလိပ်သောက်ကြတယ်၊ ဒီကြားထဲကနေ ကမ္ဘာမှာ လူတိုင်းက လေးစား အားကျရတဲ့အဆင့်ကို မရရအောင် လုပ်ဆောင်ပြနိုင်ကြတယ်။ (မေဂျီ) ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးခေတ်တုံးကလို သန္နိဋ္ဌာန်နဲ့ စည်းကမ်းကိုပြန်ပြီးစွဲကိုင်လိုက်ကြတယ်။ ၁၉၄၆ ကနေ ၁၉၈၉ အထိသာ ကြာလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်သူကမှ ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ မထင်မှတ်တဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနဲ့အတူ ထိုက်တန်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို စုစုစည်းစည်းနဲ့ အရယူနိုင်လိုက်ကြပါတယ်။ အနာဂတ်အတွက် ကြီးမားတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကို ရစေလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့တတွေဟာ ငတ်မွတ်မှုထဲကနေ၊ ရတာကိုစားပြီး ဗိုက်ဖြည့်ကြရတဲ့ ဂျပန်တွေဘဝနဲ့တော့ တူနေပါပြီ။ ဒီကနေတက်ဘို့ရာ ကျွန်တော်တို့တတွေမှာ ဂျပန်တွေနဲ့ ဘာတွေများတူလို့၊ ဘာတွေမတူနေပါသလဲ။ မီးခိုးခေါင်းတိုင်ကနေ အငွေ့ထွက်သလို ဆေးလိပ်သောက်ကြတယ်။ ကြွက်တွင်း ရေလောင်းလို့ မပြည့်နိုင်သလို အရက်သောက်ကြတယ်။ (မေဂျီ) လိုပဲ ကနောင်မင်းသားလည်းကြိုးစားဘူးတာရှိတယ်။ သန္နိဋ္ဌာန်ဆိုတာ (မဆလ) ခေတ်က ကျောင်းတိုင်းမှာ အဆိုခိုင်းတဲ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ချက်မျိုး မဟုတ်ပါ။ စစ်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက နေရာတိုင်းမှာထိပ်ကပါနေတဲ့ ဒို့တာဝန်အရေးများ မဟုတ်ပါ။ စည်းကမ်းဆိုတာ စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီကိုပြောတာ မဟုတ်ပါ။ စစ်တပ်တိုင်းမှာ စည်းကမ်းရှိတယ်။ အရပ်စည်းကမ်းနဲ့ ထပ်တူမကျပါ။
ဂျပန်တွေက (၁၉၄၆ - ၁၉၈၉) ၄၃ နှစ်နဲ့ကမ္ဘာ့ထိပ်အထိ တက်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ (၁၉၆၂ -၁၉၈၇) ၂၅ နှစ်နဲ့ ကမ္ဘာ့အောက်အထိ ဆင်းနိုင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ LDC ဘဝကနေတက်လမ်း မမြင်ရသေးပါ။ ဂျပန် ဒိုင်းယက်ထဲမှာ ယူနီဖေါင်းဝတ်တွေ မထိုင်ပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံရေးမှာ ယူနီဖေါင်းချွတ်တွေက ဦးစီးမထားပါ။ နောက်ဆုံးဖြစ်လာတဲ့ ဂျပန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး (တိုမိုမီ အင်နာဒါ) က အရပ်သူဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က ဂျပန်ပစ္စည်းကို ဘယ်သူကမှ မသုံးချင်ကြပါ။ ကနေ့တော့့
ဂျပန်တွေဆီကယူစရာ စည်းကမ်းရှိမှု၊ သန့်ရှင်းမှု၊ အချိန်အသုံးချမှုနဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်နဲ့ကိုယ့်လူမျိုးကို တကယ်ချစ်တဲ့စိတ်။ စစ်တပ်နဲ့ အရပ်ဘက်ဆက်ဆံရေး။
ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၆၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်္ဘာလ (၁) ရက်နေ့ မနက်ခင်း၊ စက်ဘီးတစီးနဲ့ ကျောက်မီးသွေးမိုးခိုးနံ့ကိုရှူရင်း မန္တလေး ဘူတာကြီးအရှေ့ဖက်ဆက်နင်း၊ အရက်ပျံနဲ့ လိုက်ဇောနံ့သင်းနေတဲ့ မန္တလေးဆေးရုံကြီးရှေ့ကဖြတ်ရင် ဖေါ်မလင်နံ့ရှိရာ ဆေးတက္ကသိုလ်မှာ ဖရက်ရှာခေါ် ကျောင်းသားသစ်လေးတယောက်ဟာ အားသစ်အင်သစ် အပြည့်နဲ့ပေါ့ဗျာ။
နောင် (၇) နှစ်မှာ ဆရာဝန်ဖြစ်ဘို့တခုတည်းသာ သိသေး။ နောင်ရေး မတွေးမိ။ နှစ်အစိတ်ရှိရင် နိုင်ငံရေးထဲ ဝင်ရမယ်လို့က စိုးစဉ်းမျှ စိတ်ကူးထဲမှာမရှိ။ နောင် (၂၆) နှစ်တိတိမှာ ကိုယ့်မွေးရာတိုင်းပြည်ကြီးကို ကျောခိုင်းပြီး ထွက်ရလမ်း မှန်းမထားမိ။ အခုရှိတဲ့နေရာဆိုတာလည်း အိပ်မက်ထဲမှာ နတ္ထိ။
နိုဝင်္ဘာလဆန်းဆိုတာ ကျွန်တော့်ဘဝမှာ အဓိပ္ပါယ်တွေ အများကြီးရှိ။
သတင်း = မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသက် ၁၈ နှစ်အောက် HIV ရောဂါကူးစက်သူ လူငယ်တွေ မနှစ်ကထက် ပိုမိုများပြား
၂ဝ၁၅ ကမ္ဘာ့ HIV ကိန်းဂဏန်း
• HIV ဟာ ကမ္ဘာ့ပြဿနာကြီးဖြစ်တယ်။
• လူဦးရေအားလုံးရဲ့ ဝ့၈% မှာ HIV ရှိနေတယ်။
• ဆာဟာရအောက်ပိုင်းဒေသမှာ ၂၅့၅ သန်းရှိတယ်။
• ၂ဝ၁၅ တုန်းက ၃၆့၇ သန်းဟာ HIV နဲ့နေထိုင်နေကြရတယ်။
• ကလေးပေါင်း ၁့၈ သန်းပါဝင်တယ်။
• AIDS နဲ့ဆက်စပ်ပြီး ၁့၁ သန်း သေဆုံးခဲ့ကြရတယ်။
• ကပ်ရောဂါစတကည်းက လူပေါင်း ၇၈ သန်းကူးစက်ခံရပြီးပြီ။ ၃၅ သန်း သေဆုံးခဲ့ရပြီးပြီ။
• ၂ဝ၁၅ မှာ လူနာသစ် ၂့၁ သန်းတိုးလာခဲ့တယ်။ ကလေးပေါင်း တသိန်းခွဲပါတယ်။
• ၂ဝ၁ဝ နောက်ပိုင်း လူကြီးတွေကူးစက်မှု ၆% နှေးတော့ရှိပါတယ်။ ဆေးကုသမှုလည်း တိုးလာတယ်။
• လူပေါင်း ၁၇ သန်းထဲက ၁၅့၈ သန်းက ART ဆေးသောက်နေကြတယ်။ အဲတာဟာ လူကြီး ၄၆% နဲ့ ကလေး ၄၉% သာဖြစ်တယ်။ ပိုးရှိနေတဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၇၇% က ART ဆေးရနေကြတယ်။
• ၂ဝဝ၅ တုန်းက သေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး အခုတော့ ၄၅% ကျဆင်းလာတယ်။
• US$ 19 billion ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ထားတယ်။ ၅၇% ကို ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကနေသာ စိုက်ထုတ်သုံးစွဲတယ်။
• ခန့်မှန်းချေ ၄ဝ% လောက် HIV ရှိနေမှန်းမသိကြပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်တိတိက ဒီလိုညမှာ နှင်းပွင့်ဖတ်တွေ ကျခဲ့တယ်။
ဒီနှစ်တော့ စောစောက ဖလန်နယ်ရှပ်အင်္ကျီလက်ခေါက်ဝတ်ပြီး လမ်းလျှောက်လို့ရသေးတယ်။
အီတလီလူမျိုးဆရာဝန်တဦးကို ယူကေနိုင်ငံမှာ အင်္ဂလိပ်စာစစ်ဆေးမှုလုပ်တော့ကျလို့ လိုင်စင်သိမ်းခံရတယ်။ (ဒေါက်တာ အယ်လက်ဆန်ဒရို တက်ပါး) ဟာ ယူကေမှာ ၂ဝ၁၄ တုံးက ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ ဥပဒေသစ်အရ အဲလို လိုင်စင်သိမ်းခံရတဲ့ ပဌမဆုံးအီးယူကဆရာဝန်ပါ။ စာမေးပွဲတွေစစ်ပြီးမှ အဲလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ သူကအီတလီကတည်းက အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းတွေ ယူလာခဲ့ပါတယ်။ ပိုလန်ဆရာဝန် ဒေါက်တာ (တောမတ်ဇ် ဖရီဇွဲလ်ဝဇ်) လည်း ယူကေမှာ (၉) နှစ် လာဆေးကုဘို့ လိုင်စင်ရထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူလည်း အင်္ဂလိပစာစာမေးပွဲ ၃ ကြိ်မ်ကျထားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေအရ (၁၂) လအတွင်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာစာမေးပွဲအောင်ရပါမယ်။
ပြောဆိုတဲ့စကားဆိုတာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လူနာပြောတာကို ဆရာဝန်ကနားမလည်ရင် အသက်ကိုပါ စေသေနိုင်တယ်။ မြန်မာစကားလည်း အတူတူပဲ။ မြန်မာစကားကို မြန်မာလို မှန်မှန်ကန်ကန်မပြောနိုင်တဲ့ အရာထမ်း အမှုထမ်းတွေရှိတော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာခက်ခဲရတယ်။ အဲတာကိုနားလည်မှုပေးတာတော့ လက်တွေ့ကျပါသေးတယ်။ စကားနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်တဲ့ ဗမာမီဒီယာမှာ မပီကလာပြောတာကိုတော့ မသင့်လို့ထင်ပါတယ်။
ပြည်ပထွက်နေရ လုပ်ရသူတွေ (၄) သန်းလောက်ရှိတယ်။ ဘာသာစကားအခက်အခဲတွေ ရှိကြတယ်။ ဒီကြားထဲ အင်္ဂလိပ်စာကို တိုင်းတပါးဆိုတဲ့တံဆိပ်ကပ်တဲ့သူက ကပ်နေသေးတယ်။ ကနေ့ခေတ်ဟာ ကိုယ့်ဟာမှမှန်တာ လုပ်နေရမယ့်ခေတ် မဟုတ်ပါ။ အဲ့့ ကိုယ့်စာနဲ့စကားကတော့ နံပတ်တစ်ဖြစ်တယ်။
မြန်မာစာ မြန်မာစကားလို မှန်ကန်ပီသ၊ အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်း အင်္ဂလိပ်လို ပြောဆိုရေးသားတတ်ရပါမယ်။ မြန်ဂလိပ် ဆိုတာ ခေါင်းမဖော်ရဲတဲ့လိပ်နဲ့တူတယ်။ လိပ်ဆိုတာ ရေထဲမှာရော ကုန်းပေါ်မှာပါ သွားလာနေထိုင်သလို ကျွန်တော်တို့လည်း အတူတူပဲမဟုတ်ပါလား။ မြန်မာလိုရော အင်္ဂလိပ်လိုပါ ကပျက်ကချော်ဆိုရင်တော့ လိပ်ကြီး ပက်လက်လှန်ထားသလို။
ဟက်ပီး ဘိန်းမုံ့ အိမ်မှာတင်လုပ်အောက်မှာ ချင် နဲ့ ခြင် လွဲရေးတာလေးတွေတွေ့လို့့
ချင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ချင်ချင်မြည်သံ။ ချင်ရဲမပြေ။ ကချင်လူမျိုး။ မချင်မရဲ။ တံခါးအချင်။ စားသောက်ချင်သည်။ ပြောချင်ဆိုချင်။ မသိစေချင်။ လုပ်စေချင်သည်။ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေသည်။
ခြင်ကတဆင့်ကူးစက်သည်။ ခြင်ထောင်နဲ့အိပ်ပါ။ ခြင်္သေ့။ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ။ အိမ်မိုးအခြင်။ ရှေ့နောက်ဆင်ခြင်ပါ။ အိပ်ချင်နေသည်။ စပါးခြင်တွယ်သည်။
ချဉ်ပေါင်ရွက်။ ငချဉ် (ငါးချဉ်)။ ခါချဉ်ကောင်။ ကျောက်ချဉ်။ ချဉ်ရည်ဟင်း။ စိတ်ချဉ်ပေါက်နေသည်။ ညောင်ချဉ်ပင်၊ ဒိန်ချဉ်၊ ပဲတီချဉ်၊ ပန်းချဉ်ပေါင်၊ မျှစ်ချဉ်၊ လေချဉ်တက်။ လက်လုပ်ချဉ်။ ဒီကောင်ကို ချဉ်နေတာကြာပြီ။
Photo from TTSweet
ဆေးကျောင်းတက်ဖက် သူငယ်ချင်းတယောက်ကနေ ဖေါင်ကြီးသင်တန်းကို အတူတက်ကြတဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်စ သုံးယောက်ပုံကိုတင်ပြီး Three Musketeers လို့ရေးတယ်။ ကျွန်တေ်ာလည်း လူသုံးယောက်တွေ့ရင် သရီး မာစက်တီးယားဖြစ်ဖြစ်။ သုံးယောက်ပေါင်းလောင်းကျော်ဖြစ်ဖြစ် ပြောမိတယ်။
သရီး မာစကက်တီးယားခေါ် သေနတ်သမားသုံးယောက်ဝတ္ထုကို မြန်မာဘာသာပြန်တာ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဖတ်ဖူးတယ်။ ရုပ်ရှင်လည်းကြည့်ရတယ်။ သုံးယောက်ပေါင်းလောင်းကျော်ကလည်း မြန်မာရုပ်ရှင်ပဲ။
သရီး မာစကက်တီးယားထဲက ဇာတ်လိုက်နာမည်တွေက အဆန်းတွေ။ ပြင်သစ်နာမည်တွေမို့ပါ။ စိတ်ထဲမှာ စွဲနေတာတခုပဲ ကျန်တယ်။ ဒါးတညံ့။ တခြားသူငယ်ချင်းကနေ ထပ်ဖြည့်ပေးလို့ ပေါသိုး နဲ့ အားသိုး တို့ကိုအမှတ်ရတော့တယ်။
Athos အားသိုး၊ Porthos ပေါသိုးနဲ့ Aramis အာရာမီတို့က သေနတ်သမားသုံးယောက်။ D'Artagnan ဓါးတညံ့ ကတော့ တောကနေ ပဲရစ်မြို့ကြီးတက်လာသူ။ ဝတ္ထုကို နာမည်ကြီးစာရေးဆရာ Alexandre Dumas အလက်ဇန်းဒါး ဒူးမားက ၁၇ ရာစုဇာတ်လမ်းရေးတာပါ။
ဖေါင်ကြီးသင်တန်းမှာ အကောင်းဆုံးသင်တန်းသားကို ငွေဓါးဆုပေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ၂ဝ ရာစုထဲက ဆရာဝန်တွေကတော့ ဓါးတညံ့တွေချည်းပဲ။ အဲ့့ ခွဲစိတ်ဓါးတော့ လက်ကချမထားချင်ပါ။
ဓါတ်ပုံ = ၁၉၇၅ ဇေယျ ၂ဝ က မျိုးဝင်း၊ ကြံအောင်နဲ့ ဇော်မင်း။ ၁၉၇၄ ဇေယျ ၁၉ က သက်တင်၊ တင့်ဆွေနဲ့ ကံလှိုင်။
Griseofulvin မိုးတောင်က၊ ပွေးပေါင်က၊ ဆေးအတု တရုပ်ပြည်က
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန (FDA) အများပြည်သူသိရှိရန်အသိပေးနှိုးဆော်ချက်
၁။ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသည် အရည်အသွေးစစ်မှန်ကောင်းမွန်ပြီး၊ ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းကာ အကျိုးအာနိသင်ရှိသောဆေးဝါးများကို အများပြည်သူတို့သုံးစွဲနိုင်ရန် စနစ်တကျကွပ်ကဲ ကြပ်မတ်လျက်ရှိပါသည်။
၂။ ဈေးကွက်ရှိဆေးဝါးများကို ပုံမှန်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ဆေးဗူးပေါ်တွင် ဖော်ပြချက်အရ Chengdu Ernei Pharmaceutica Co., Ltd, Sichuan, China ထုတ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်မရှိသော Griseofulvin Tablets 125mg ဆေးဝါးသည် ဆေးဝါးအတု(အတု) ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသည်။
၃။ ဆေးဝါးအတု၊ စံမညီဆေးဝါးများကို မှီဝဲသောရောဂါဝေဒနာရှင်များသည် စရိတ်များစွာကုန်ကျသည့် အပြင် မိမိတို့ခံစားနေရသော ရောဂါများပျောက်ကင်းခြင်း (လုံးဝ) မရှိဘဲ ပိုမိုဆိုးရွားသောအခြေအနေ ခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ ဆေးဝါးတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးသည့်ကုမ္ပဏီ၊ ဆေးဝါးရောင်းချသည့်ဆေးဆိုင်များသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသော ဆေးဝါးများ၊ ဆေးဝါးအတု၊ စံမညီဆေးဝါးများ တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း လုံးဝ(လုံးဝ) မပြုရန်နှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းက အမျိုးသားဆေးဝါးဥပဒေပုဒ်မ (၁၈) အရ တရားစွဲဆိုအရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
၃ဝ-၁ဝ-၂ဝ၁၆ နေ့ထုတ် 7Day Daily မှာ ဒေသတွင်းနိုင်ငံများတွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် သေဆုံးမှုနှုန်း မြန်မာနိုင်ငံက နီပေါနိုင်ငံပြီးလျှင် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်လို့ ရေးသားထားတယ်။
ကမ္ဘာမှာ အမျိုးသမီးပေါင်း (၈၃ဝ) ယောက်ဟာ ကလေးဖွားခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတခုခုနဲ့ဆက်စပ်ပြီး နေ့စဉ် သေဆုံးနေရတယ်လို့ ၂ဝ၁၅ နိုဝင်္ဘာလမှာ WHO ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်အတွင်း အမျိုးသမီး စုစုပေါင်း ၃ သိန်း ၃ ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်။ ဆာဟာရတောင်ပိုင်းဒေသက အဆိုးဆုံးဖြစ်တယ်။ အာရှနဲ့ မြောက်ပိုင်း အာဖရိကမှာလည်း ဆိုးတယ်။
Maternal mortality ratio (MMR) မီးတွင်းသေဆုံးနှုန်းကို ကလေးအရှင်မွေး တသိန်းမှာ သေဆုံးသူ ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိသလဲလို့တွက်ယူပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့စာရင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံက တတိယလိုက်ပါတယ်။
နီပေါ = ၂၅၈
တီမောလက်စ် = ၂၁၅
မြန်မာနိုင်ငံ = ၁၇၈
ပါကစ္စတန် = ၁၇၈
ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် = ၁၇၆
အိန္ဒိယ = ၁၇၄
ကမ္ဘောဒီးယား = ၁၆၁
ဘူတန် = ၁၄၈
အင်ဒိုနီးရှား = ၁၂၆
ဖလစ်ပိုင် = ၁၁၄
မြောက်ကိုရီးယား = ၈၂
မောလ်ဒိဖ် = ၆၈
ဗီယက်နမ် = ၅၄
မလေးရှား = ၄ဝ
သီရိလင်္ကာ = ၃ဝ
တရုပ် = ၂၇
ထိုင်း = ၂ဝ
တောင်ကိုရီးယား = ၁၁
စင်္ကာပူ = ၁ဝ
ကနေဒါ = ၇
သြစတေးလျ = ၆
ဂျပန် = ၅
ဖင်လန် = ၃
ဂရိ = ၃
အိုက်စလန် = ၃
ပိုလန် = ၃
ဂမ်ဘီယာ = ၇ဝ၆
ဘာရွန်ဒီ = ၇၁၂
ဆိုမာလီ = ၇၃၂
တောင်ဆူဒန် = ၇၈၉
ဗဟိုအာဖရိ = ၈၈၂
ချတ် = ၈၅၆
ဆာရာလီယွန်း = ၁၃၆ဝ
အဲလိုအမျိုးသမီးတွေ ဘာကြောင့်သေဆုံးရသလဲ။ တချို့သေဆုံးရစေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဟာ ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ ရနိုင်တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ကလေးမွေးပြီး သွေးအလွန်ဆင်းခြင်း
၂။ ကလေးမွေးပြီး ကူးစက်ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း
၅။ စိတ်မချရတဲ့နည်းနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချင်း
မီးတွင်းမိခင်သေဆုံးမှု များနေစေတဲ့ အခြေခံအကြောင်းတွေကတော့ -
မြန်မာပြည်က မိခင်လောင်းတွေ ကျန်းမာကြပါစေ။
(မနှစ်က ဒီနေ့မှာ Sweep vote အမှိုက်သိမ်းရေး မဲပေးပါခေါင်းစဉ်နဲ့ ရေးခဲ့တဲ့စာ)
မုံရွာမှာပွဲအပြီး အမှိုက်ကောက်ကြတာကို သဘောကျလို့ အမှိုက်သိမ်းခွင့်တော်လှန်ရေးဆိုပြီး စာလေး နှစ်ကြောင်း သုံးကြောင်း ရေးလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့တတွေ တကယ်ကို အနှစ်နှစ်ဆယ်လောက်ကြာအောင် ကိုယ့်အမှိုက်ကိုယ် ကောက်ခွင့်ရလာအောင် ကြိုးစားခဲ့ရတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ အမှိုက်လှည်းတာ ကိုယ့်အိမ်ရှေ့လမ်းကိုယ်တာဝန်ယူတဲ့ခေတ်ရှိခဲ့တယ်။ လမ်းထဲက စေတနာထားသူ တယောက်က တလမ်းလုံး နိစ္စဓူဝလှည်းရှင်းတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်။ အလိုက်သိတဲ့ အိမ်နီးခြင်းတွေက လှည်းပုံထားပြီးသား အမှိုက်ကို လာကြုံးပေးကြတယ်။ အဲတာလည်း ပညာပါသေးတယ်။ မြေကြီးတွေ ကျန်နေစေရမယ်။ မဟုတ်ရင် လမ်းခွက်ဝင်ပြီး မိုးရွာရင်ရေဝပ်မယ်။ လက်ခတ်လို့ခေါ်တဲ့ သစ်သားပြား နှစ်ချပ်ကို တဖက်ကအဖြောင့် တဖက်ကိုခုံးခုံးလေးလုပ်ထားတာနဲ့ အမှိုက်ကြုံးရတယ်။ အိမ်မှာကိုယ့်ဖါသာလုပ်ရတာ ကျွန်တော်က သိပ်မပိုင်ပါ။
မှတ်ချက် = အရင်က တံမျက်စည်းလို့ရေးတာလည်း တွေ့ဘူးတယ်။
သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ငြိမ်းချမ်းရေးသဝဏ်လွှာလေးချိုးကြီးတင်စဉ်က ကြငှန်းသတ်ပုံမှားတာ သတိမထားလိုက်မိလို့ ပြန်ပြင်ရပါတယ်။ တချို့က အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ (ဟထို) ကို အလွယ်ရေးမိတတ်ကြတယ်။ (ဟထိုး) ဟာ ဗျည်းစာလုံးတွေရဲ့ အလယ်ကနေ အောက်ကိုဆွဲရမယ်။ အဆုံးကနေဆက်ပြီး အောက်ကိုမဆွဲရပါ။ င ကို အဆုံးကနေအောက်ဆွဲလိုက်ရင် ဌ ဖြစ်သွားမယ်။ ငှ လို့ရေးမှသာ မှန်တယ်။
ဌ = ပဌမ (ပထမ)။ ဌပနာသည်။ ဌပနာတိုက်။ ဥက္ကဌ (ဥက္ကဋ္ဌ)။
ပထမ = သင်္သကကြိုက် (သင်္သသကရိုက်၊ ဆန်းစ်ကရစ်)
ဋ္ဌ = ဆဋ္ဌမ။ အဋ္ဌမ။ ဒိဋ္ဌမျက်မြင်။ ကုဋ္ဌနူနာ။ အဋ္ဌကထာ။ ပြဋ္ဌာန်း။ ဥက္ကဌ (ဥက္ကဋ္ဌ)။ အဋ္ဌာရသပညာ။
Urinary Incontinence in Women အမျိုးသမီး ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်း
၁။ ကျွန်မ အသက် ၃၅နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ သမီး ၂ ယောက်မွေးထားပါတယ်။ ကျွန်မ အခု ကိုယ်တွေယားပြီး အပိန့်အကွက်ကြီးများထွက်ပါတယ်။ ဓာတ်မတည့်မှုလဲအမြဲလိုဖြစ်တတ်ပြီး နေပူထဲသွားလျှင် အနီကွက်တွေလဲ ထွက်တတ်ပါတယ်။ အဲလိုဖြစ်ပြီးလျှင်ဆီးလဲမထိန်းတော့ပါဘူးဆရာ။
၁။ ဆရာရှင့် ကျွန်မကခွဲထားတာ ၁ နှစ်ကျော်ပါပြီ။ အရည်အိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးဥလက်နှစ်ဘက်စလုံးပါ။ မခွဲခင်ကလည်း ဆီးမထိန်းနိုင်ပါရှင့်။ ခွဲပြီးတော့လည်း မထိန်းနိုင်ပါ။ ဆီးပိုးကြောင့်ဆိုပြီး ပိုးသတ်ဆေးတွေလည်း တပတ်ကျော်သောက်ရပါတယ်။ ဒါလည်းမထူးပါ။ ခရီးသွားရင် ပိုဆိုးပါတယ်။ ကားကို နာရီဝက်လောက်ဆို ရပ်ပြီး နေရာရှာရပါတယ်။ အဲဒီအတွက် လေ့ကျင်ခန်းနဲ့ဆေးဝါးလေးများ ညွှန်ကြားပေးပါရှင်။ အသက်က ၄၉ ပါဆရာ။
၂။ ဆရာရှင့် ခုတစ်ခါ ကျမရဲ့အမပါ။ အသက်ကတော့ ၃၄ နစ်ပါ။ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ ကလေးတယောက်ရပြီ။ နှာချေ တဲ့ အခါတို့ချောင်းဆိုးတဲ့အခါတို့မှာ ဆီးမထိန်းနိင်ပါရှင့်။ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ ညွှန်ကြားပေးစေချင်ပါတယ်ရှင့်။
ကလေးတွေ အသက် ၅-၆ နှစ်ဆိုရင် ဆီးကို ထိန်းနိုင်လာကြပြီ။ သွားရမဲ့နေရာကြမှသာ ဆီးသွားတတ်လာမယ်။ တလထဲမှာ ၂ ခါလောက် အိပ်ရာထဲရှူပါရင် Bed wetting (Enuresis) ခေါ်တယ်။ စိတ်ဖိအားများရင်၊ ကြောက်စိတ်ဝင်ရင် အမျိုးသမီးတွေကြီးလာရင်အဲလိုဖြစ်နိုင်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဆီးလမ်းကြောင်း တည်ဆောက်ထားပုံ၊ ကလေးမွေးရတာ၊ သွေးဆုံးတာ၊ ဆီးလမ်းပိုးဝင်တာတွေကြောင့် သန်းပေါင်းများစွာ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဖြစ်နေကြတယ်။ အာရုံကြောထိခိုင်ရင်တော့ ကျားရော မပါဖြစ်တယ်။ ဆီးလမ်းကိုထိန်းပေးနေတဲ့ ကြွက်သားတွေနဲ့ အာရုံကြောတွေမှာ တခုခုဖြစ်လို့ဖြစ်ကြရတယ်။
ဆီးမထိန်းနိုင်တာ (၆) မျိုးရှိတယ်။
၁။ Stress Incontinence ဖိအားကြောင့် = ချောင်းဆိုး၊ ရယ်မော၊ နှာချေ၊ စတာမျိုးကနေလဲဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ကြောင့်၊ မီးဖွါးလို့နဲ့ သွေးဆုံလို့ကြောင်လဲ ဖြစ်တယ်။ (အီစထိုဂျင်) နည်းတဲ့ ရာသီမလာခင် တပါတ်လောက်မှာ ပိုသိသာတယ်။
၂။ Urge Incontinence ဆီးသွားချင်လာရင် အမြန်သွားရခြင်း = အာရုံကြောမှာ ပြဿနာရှိလို့ဖြစ်ရတယ်။ ဆီးသွားစေတဲ့ဆေးသောက်ထားရင်၊ စိုးရိမ်စိတ်များရင်၊ တချို့က ပူလို့၊ တချို့ကအေးလို့ ဖြစ်ကြတယ်။
၃။ Functional Incontinence လုပ်ငန်းပျက်ယွင်းခြင်း = လည်ပင်းကြီး-ဟော်မုန်း များတာနဲ့ ဆီးချို မထိန်းနိုင်တာကနေလဲ ဖြစ်နေတာကို ဆိုးစေနိုင်တယ်။ အာရုံကြောရောဂါ၊ ထိခိုက်မိတာတွေကနေလဲ ဆီးအိမ်ကိုထိန်းလို့ ခက်စေမယ်။ (မာလ်တီပယ်-စကလ်ရိုးဆစ်) (ပါကင်ဆန်) ရောဂါ (အဇာမိုင်ယာ) ရောဂါ၊ ဦးနှောက် သွေးကြောပိတ်ရောဂါတွေကနေလဲ ဖြစ်တယ်။ လူဝလွန်းရင်၊ အိုလာရင် ယောက်ျားတွေရော မိန်းမတွေမှာပါ ဆီးမလုံတာဖြစ်နိုင်တယ်။
၄။ Overactive Bladder ဆီးအိမ်က လိုတာထက်ပိုအလုပ်လုပ်နေခြင်း အာရုံကြောကြောင့် ဖြစ်တယ်။
၅။ Overflow incontinence ယောက်ျားတွေမှာ ပိုဖြစ်တယ်။ ဆီးပိုက်ပိတ်နေတာ၊ ဆီးချိုကြောင့် အာရုံကြော အားနည်းတာ၊ ဆီးကျောက်။ ကင်ဆာတွေကနေဖြစ်စေတယ်။
၆။ Transient incontinence အခိုက်အတန့်မှာသာဖြစ်တာက ဆီးလမ်းပိုးဝင်နေချိန်၊ ဝမ်းချုပ်နေချိန်၊ စိတ်ဖိအားများချိန်၊ ဆောင်းတွင်းအချိန်တွေမှာ ဖြစ်တယ်။
ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအပေါ်မူတည်ပြီး ကုသရတယ်။ အာရုံကြောထိခိုက်ပျက်စီးတာမျိုးကတော့ မရနိုင်ဘူး။
• ခွဲစိတ်ကုသနည်းလဲရှိတယ်။ ခွဲစိတ်နည်းကလဲ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ခွဲစိတ်ကုသနည်း ၃ မျိုးသုံးကြတယ်။ Retropubic suspension နည်း၊ Sling procedures နည်း နဲ့ Midurethral slings နည်းတွေဖြစ်တယ်။
• သားအိမ်ကျရောဂါရှိရင် ခွဲစိတ်ပြုပြင်နည်းဖြစ်ဖြစ် သားအိမ်ထုတ်နည်းဖြစ်ဖြစ် လုပ်နိုင်တယ်။
Oxybutynin ဆေးသုံးတာထိရောက်တယ်။ မျက်စိရေတိမ် ထိန်းမရသူ။ အစာလမ်းပိတ်နေသူ၊ အစာနဲ့လေ အထက်ဆန်သူတွေ ဆရာဝန်ညွှန်မှသာ သုံးသင့်တယ်။ ချွေးထွက်နည်းတတ်တယ်။ အာခေါင်ခြောက်။ ခေါင်းမူး။ မျက်စိဝါးတတ်တယ်။ Oxybutynin5mg ကို တနေ့ ၁-၂-၃ ကြိမ်သောက်နိုင်တယ်။
(မနှစ်က ဒီနေ့မှာ တင်ခဲ့တဲ့စာ)
မိဘတွေ အိုကံမကောင်းကြတာမှာ သားနှစ်ယောက်က နိုင်ငံရေးထဲဝင်ပါခဲ့လို့ပြောရင် မှန်တယ်။ အမေဆုံးပြီး နှစ်ပါတ်ကြာမှသာ ညီကမုံရွာထောင်ကလွတ်တယ်တဲ့။ ကျွန်တော်က တိုင်းပြည်ထဲမှာမရှိပါ။ သူရေးတဲ့ ကျေးဇူးဂုဏ်စိုင် မကုန်နိုင်ဘူး (သို့) အမေ့ မုသားစကားရှစ်ခွန်း တင်ထားတာကို ဖတ်ရတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အမေဆုံးတဲ့သတင်းရော ညီထောင်ကထွက်တဲ့သတင်းပါ လေးလကြာမှသာ သိခွင့်ရခဲ့တယ်။
သားဆရာဝန်ဟာ အမေခြေကျိုးတာကို ကုသပေးခွင့် မရလိုက်ပါ။ အဖေဆုံးတဲ့ရက်မှာတော့ နေ့ချင်းဆိုသလို သိခွင့်ရတယ်။ သူတို့ကျန်းမာရေးနဲ့ အသုဘအတွက် ဝါယမစိုက်ကြတဲ့ သွေးသားဆွေမျိုးတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေမျိုးတွေကို ကျေးဇူးတင်လျက်ပါ။ အဲဒီဆွေမျိုးတွေ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။
ကျွန်တော့ အမေနဲ့ အဖေ့ဓါတ်ပုံတွေကို ၅-၁၂-၂ဝ၁၄ ကနေ့မနက်မှာ ရပါတယ်။ တိုင်းပြည်ကထွက်ရပြီးနောက် (၂၄) နှစ် ကြာမှသာရတယ်။
ကျွန်တော်တို့မိဘတွေ နောက်ဘဝတွေမှာ မင်းဆိုးဒဏ်သင့်သူတွေနဲ့ ကင်းလွတ်ပါစေ။ မြန်မာပြည်သူတွေ မင်းဆိုးဘေးက ဝေးကြပါစေ။ သီတင်းကျွတ်မှာ မိဘကျေးဇူးဆပ်နိုင်သူတွေ များပြားပါစေ။
ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်စာ (၃) ပုဒ်ဆက်တင်ထားပါတယ်။ မေးလာကြတယ်။ တချို့က စာမဖတ်ပဲ မေးကြတယ်။ တချို့ကို စာတင်ထားမှန်းမသိလို့ မေးကြတယ်။
2. Active Zika found in saliva and urine ဇီကာဗိုင်းစ်အရှင် တံတွေးနှင့်ဆီးထဲမှာတွေ့ရှိ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/active-zika-found-in-saliva-and-urine.html
6. DHF သွေးလွန်-သွေးစုပ် ဘေးက ဝေးကြပါစေ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/10/dhf.html
7. Honduras Declares Emergency to Fight Zika Virus http://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/honduras-declares-emergency-to-fight.html
8. Insecticide-Treated Bed Nets ခြင်ထောင်ကို ခြင်ဆေးသုတ်ပေးနည်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/10/insecticide-treated-bed-nets.html
9. Malaria in pregnancy ကိုယ်ဝန်နဲ့ ငှက်ဖျား http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/malaria-in-pregnancy.html
10. Malaria ငှက်ဖျားရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/malaria.html
11. Microcephaly ဇီကာနဲ့ ခေါင်းသေးသေးနဲ့ကလေး http://doctortintswe.blogspot.com/2016/10/microcephaly.html
12. Mosquito control summary ခြင်နှိမ်နင်းရေးအချုပ် http://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/mosquito-control-summary.html
13. Mosquito control ခြင်နှိမ်နင်းရေး http://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/mosquito-control.html
14. Mosquito question ခြင်နှိမ်နင်းရေးမေးခွန်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/mosquito-question.html
17. Singapore reports first imported Zika case စင်္ကာပူမှာ ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးစတင်တွေ့ရှိ http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-reports-first/2782808.html
18. WHO declares global emergency ဇီကာဗိုင်းရပ်စ် အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာလိုက် http://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/who-declares-global-emergency.html
19. Why Is It Called The Zika Virus? ဘာလို့ ဇီကာ ခေါ်သလည်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/why-is-it-called-zika-virus.html
21. Zika causes birth defects (ဇီကာ) ကနေ ဦးနှောက်ရောဂါဖြစ်စေတာ သေချာပြီ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/04/zika-causes-birth-defects.html
23. Zika virus control ဇီကာဗိုင်းရပ်စ် ထိန်းချုပ်ရေး http://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/zika-virus-control.html
24. Zika virus pregnancy case confirmed in Spain http://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/zika-virus-pregnancy-case-confirmed-in.html
25. Zika virus triggers pregnancy delay calls (ဇီကာ) ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကိုသတိပေး http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/zika-virus-triggers-pregnancy-delay.html
26. Zika virus triggers pregnancy delay calls http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/zika-virus-triggers-pregnancy-delay.html
27. Zika virus ဇီကာဗိုင်းရပ်စ် သတိထားသင့်လာပြီ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/zika-virus.html
28. Zika ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကို ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ (ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန) http://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/zika.html
ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ နောက်ဆုံးတင်ထားတဲ့ (၃) ပုဒ်က မြန်မာပြည်အတွက် အရေးအကြီးဆုံးပါ။ စာတွေထဲမှာ မပါတာမျိုး မသိပါ။
ကန်တော်မင်းကျောင်းဆရာတော် ရေးသားခဲ့ပြီး၊ ၁၉၆၃ ခုနှစ်က ဟံသာဝတီတိုက်ကနေထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ လောကသာရပျို့
၁၅။ သူတော်တကာ၊ တတ်စရာသား၊ အဋ္ဌာရသ၊ သိပ္ပအပြား၊ အတတ်များကို၊ မှတ်သားသတိ၊ ပညာရှိတို့၊ တတ်သိအပ်စွ၊ ထိုသိပ္ပကို၊ နှံ့မျှလုံးခြုံ၊ မတတ်တုန်လည်း၊ တစုံတခု၊ တတ်အေင်ပြု၍၊ လူမှုကုန်အောင်၊ စီးပွားဆောင်လော့၊ ညဉ့်မှောင်ရောက်ဘိ၊ ကြက်မျက်စိသို့၊ မိမိကိုယ်ဘို့၊ အတတ်ချို့မူ၊ သူတို့ပြစ်တင်၊ ကဲ့ရဲ့မြင်အံ့၊ ထင်ထင်မျက်မြော်၊ မကော်ရော်သည်၊ ၊ အိုသော် သူမရယ်စေမင်း။
မှတ်ချက် = တစ်စုံတစ်ခု မဟုတ်။
ယောက်ျားတားဆေး ထိုးဆေးစမ်းသပ်မှု အလားအလာကောင်း
၂၈-၁ဝ-၂ဝ၁၆ နေ့သထွက်တဲ့ ဆေးသုတေသနသတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟော်မုနုးတမျိုးသုံးပါတယ်။ ထိရောက်ပြီး စိတ်ချရတယ်လို့ သိလာပါတယ်။ ယောက်ျားတားဆေး ထိုးဆေးစမ်းသပ်မှုလုပ်နေတာ အနှစ် (၂ဝ) ကြာပါပြီ။
အသက် ၁၈ နှစ်ကနေ ၄၅ နှစ်အတွင်း စမ်းသပ်ခံဘို့ သဘောတူကြတဲ့ အတွဲပေါင်း ၂၇ဝ ထဲက ယောက်ျားတွေကို စမ်းသပ်တာမှာ ၉၅% အောင်မြင်တာတွေ့ရတယ်။ ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုတွေထဲမှာ ဝက်ခြံထွက်တာနဲ့ စိတ်မူပြောင်းတာ ကြွက်သားနာတာပါတယ်။
ကျန်းမာတဲ့ယောက်ျားတိုင်မှာ ၁ မီလီလီတာထဲမှာ သုက်ပိုးအရေအတွက် ၁၅ သန်းပါနေတယ်။ စမ်းသပ်ခံသူတွေကို Progesterone ပရိုဂျက်စတီရုန်းနဲ့ Testosterone တက်စတိုစတီရုန်းနဲ့တူတဲ့ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲ ထိုးဆေးထိုးပေးခဲ့တယ်။ သူတို့သုက်ရည်ကို စစ်ဆေးနေတာမှာ သုက်ပိုးအရေအတွက် တသန်းအောက်ထိ ကျသွားတာတွေ့ရတယ်။ ထိုးဆေးရပ်တဲ့နောက်မှာ (၈) ယောက် တနှစ်အကုန်မှာ သုက်ပိုးအရေအတွက် အရင်လောက်ထိပြန်တက်လာတယ်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေအဖွဲ့ WHO ရဲ့ Semen Analysis သုက်ရည်စစ်ဆေးခြင်း သတ်မှတ်ချက် -
• သုက်ရည် ၁ စီစီထဲမှာ Spermatozoa သုက်ပိုးကောင်ရေ သန်း ၂ဝ ပါရတယ်၊
အမေရိကန် National Infertility Association အသင်းမှာ Semen Analysis သုက်ရည်စစ်ဆေးခြင်း သတ်မှတ်ချက် -
• Total Volume စုစုပေါင်းထုထည်25 milliliters
• Sperm Count စုစုပေါင်းသုက်ပိုးအရေအတွက် 40 million to 300 million (အနည်းဆုံး 20 million ရှိရင် မျိုးပွါးနိုင်)
• Motility and Velocity လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်း 50% အနည်းဆုံးရှိရမယ်။ လှုပ်ရှားမှုအရည်အသွေး အနည်းဆုံး2ရှိရတယ်။)
• Morphology ပုံသဏ္ဌာန် အနည်းဆုံး 30% ပုံမှန်ရှိရမယ်။
• Liquefaction အရည်ပျော်ခြင်း 20 minutes မှာဖြစ်ရမယ်။
• Seminal Fructose ဖရပ်တို့စ်သကြားဓါတ် နဲ့ Cultures ပိုးမွေးတာ လိုသူတွေကို လုပ်ရတယ်။
၁၇-၈-၂ဝ၁၂ နေ့ကလည်း JQ1 ခေါ်တဲ့ ယောက်ျားတားဆေး စားဆေးစမ်းသပ်မှုသတင်းပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
၁၃။ ထုံးတီးနည်းနာ၊ အဖြာဖြာ၌၊ ပညာရှိမှီး၊ မကြီးသက်ရွယ်၊ အငယ်သော်က၊ ကြိုးလုံ့လ၍။ နှိမ့်ချပုဆစ်၊ ဆရာစစ်၌၊ ကြောက်ချစ်ရိုသေ၊ လုပ်ကြွေးထွေဖြင့်၊ စာပေတတ်ကြောင်း၊ တချောင်းချောင်းလျှင်၊ ဆဲမောင်းသည်းခံ၊ ဆရာ့ထံ၌။ သင်အံကျက်လေ့။ တနေ့တပါး၊ မှတ်သားလေလေ၊ ဝမ်းထဲခွေ၍၊ အထွေအထူး၊ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို၊ ၊ ဆည်းပူးသိမြင် ကြွယ်စေမင်း။
မှတ်ချက် - တစ်ချောင်းချောင်းလျှင် မဟုတ်။ တစ်နေ့တစ်ပါး မဟုတ်။
ညဥ့်မှောင်မသိ ကြက်မျက်စိခေတ် ကုန်ဆုံးပါစေသည်း။ အိုသော်သူ အရယ်မခံကြရစေသတည်း။
၁၈။ စေ့မြေ့သိပ်သည်း၊ ရွေ့ရွေ့ဆည်းသော်၊ စရည်အိုးခွက်၊ ကြီးစွာလျက်တည့်၊ တံစက်ကျများ၊ ပြည့်သောလားသို့၊ ပျား၏နည်းနှုန်း၊ မှတ်ကျင့်သုံး၍၊ ခြပုန်းတောင်ပို့၊ ဖို့သည်ခြင်းရာ၊ လူလိမ္မာတို့၊ ဥစ္စာဆီးထွေ၊ တတ်လှစေလော့၊ ကြွက်သေတခု။ အရင်းပြု၍၊ ကြွယ်မှုတတ်ဆုံး။ သေဋ္ဌေးထုံးကို၊ နှလုံးမူလျက်၊ ကြံစည်နက်၍။ ။ သူ့ထက်လွန်ကုန် ကြိုးစေမင်း။
လိမ်မာကို အရင်က လိမ္မာလို့ရေးခဲ့ကြတယ်။
ကြွက်သေတခုကိုတော့ ကြွက်သေတစ်ခုလို့ ပေါ်လစီသတ်ပုံအရ ရေးနေကြပါတယ်။
သေဋ္ဌေးကို သဋ္ဌေးလို့လည်း ရှေးကရေးကြပါတယ်။ သေဌေးနဲ့ သဌေးတော့ မဟုတ်ပါ။ အခုခေတ်ထုတ် အဘိဓာန်တွေမှာ သူဌေးလို့ရေးထားကြတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ခရိုနီလို့ပြောင်းခေါ်ကပြန်တယ်။
Insecticide-Treated Bed Nets ခြင်ထောင်ကို ခြင်ဆေးစိမ်နည်း
ခြင်မကပ်နိုင်အောင် ဆေးသုတ်ပေးထားတဲ့ခြင်ထောင်ကို Insecticide-treated bed nets (ITNs) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ခြင်းကတဆင့်ကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေကာကွယ်ရေးနည်းတွေထဲက နည်းတခုဖြစ်တယ်။ ဒီနည်းသုံးလို့ အဲလိုရောဂါတွေ ထူပြောတဲ့ အာဖရိကမှာ ၅ နှစ်အောက်ကလေးသေဆုံးတာ ၂ဝ% လျှော့ကျလာပါတယ်။ ဆေးက ခြင်သာမကာ တခြား အင်းဆက်ပိုးမွှားတွေကနေပါ ကာကွယ်မှုပေးမယ်။
ခြင်ထောင်အရွယ်အစားက အမျိုးမျိုးရှိလို့ ဆေးသုံးနည်းကိုလိုက်နာရပါမယ်။ ခြင်ထောင်လုပ်ထားတဲ့အစကလည်း အမျိုးမျိုး polyester, polyethylene, polypropylene စသဖြင့်ရှိတယ်။
Pyrethroid insecticides ဆေးကိုသာ အသိအမှတ်ပြုထားသေးတယ်။ နေရောင်ခံတယ်။ လျှော်ဖွပ်ခံတယ်။ ဆေးမပျယ်ဘဲ တာရှည်နေတယ်။ ဆေးနည်းနည်းကျန်သေးတာတောင် ခြင်းကိုသေစေမယ်။ အရင်က ၆ လကနေ ၁၂ လအထိခံတယ်။ ဆေးစိမ်ပြီး အရိပ်ထဲမှာ ခြောက်စေသင့်တယ်။
သုံးစွဲတာကြာလာတော့ ဆေးယဉ်လာတာကို စိုးရိမ်ချက်ထားပါတယ်။ အဲတာကြောင့် Piperonyl butoxide (PBO) ဆေးကိုပါ Pyrethroid insecticide ဆေးနဲ့တွဲသုံးလာရတယ်။ ပိုထိရောက်သလားကတော့ လေ့လာမှုတွေ လုပ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ WHO ကတော့ ဆေး ၂ မျိုးရောဘို့ မပြောသေးပါ။
Long-Lasting Insecticide-treated Nets (LLINs) တာရှည်ခံခြင်ထောင်သုံးခြင်ဆေးပေါ်လာပြီ။ ဆေးတခါ စိမ်ပေးထားရင် ၃ နှစ်အထိခံတယ်။ အကြိမ်ကြိမ်လျှော်လို့လည်းရတယ်။ WHO Pesticide Evaluation Scheme (WHOPES) ကနေ ၁၅ မျိုးအသိအမှတ်ပြုပေးထားတယ်။ အမေရိကန် CDC ကတော့ စစ်ဆေးတုန်းရှိပါသေးတယ်။
ကျွန်မ တခုလောက်မေးချင်ပါတယ်ဆရာ။ ကျွန်မကလေးတော့ မရသေးပါဘူးရှင့်။ ကျွန်မ virgin serum သုံးချင်တာ၊ ကလေးယူနေတဲ့သူဆိုတော့ သုံးရတာအဆင်ပြေနိုင်မလားရှင့်။ ကျွန်မ မနေ့က healthy shop ကထုတ်တဲ့ virgin serum ဝယ်လာပြီးမသုံးရသေးပါဘူးရှင့်။သူတို့ကတော့side effect မရှိဘူးပြောပါတယ်ှင့်။ သုံးသင့်မသုံးသင့် ဆရာ့ကို အရင်တိုင်ပင်တာပါရှင့်။ ပြောပြပေးပါဦးဆရာ။ ကျွန်မဝယ်လာတဲ့ virgin serum ဗူးခွံလေး တချက်လောက် ကြည့်ပေးပါဆရာရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
1. Drunk Elephant Virgin Marula Luxury Facial Oil 1 oz $72.00 from4stores
2. Bee Friendly SK Organic Face and Eye Serum $44.99 from 5+ stores
3. Virgin Plum Seed Face Oil / Oil Face Serum / Moisturizer $16.00 from Etsy - BeigeDuskGreys
4. Anti Aging Facial Serum - Retinol + Ferulic Acid + Virgin Coconut Oil $18.58 from 5+ stores
5. Oxalis Apothecary - Facial Serum | Daily Glow $40.00 from Decovo
6. Organic Doctor Virgin Olive Oil Eye Serum - 15 ml. Liquid $9.49 from Vitamin World
7. Handmade Bio Organic Virgin Anti-aging Face Serum Moisturizer $35.00 from eBay
8. Placenta Serum (imported From Zealand) In Pure Organic Virgin Coconut $33.26 from eBay
9. Perricone MD Chia Omega-3 Serum Duo Auto-Delivery $89.00 from QVC.com
10. Mistine Virgin Coconut Hand & Finger Whitening Serum $4.85 from eBay
11. Beppin Body☆miccosmo Japan-virgin White Serum 30g $14.63 from eBay - jaipfe
12. Earth Tu Face Face Serum $62.00 from Spring
13. Miccosmo Beppin Body Virgin White Serum 30g $17.00 from eBay - lovely-love-chan0509
14. Mistine Virgin Organic Natural100% Coconut Hand&finger Whitening Serum $7.99 from eBay
15. 20g Mistine Serum Virgin Coconut Nourishing Hand Finger Whitening $9.00 from eBay
16. evanhealy Neem Immortelle Purifying Infusion 1oz $29.99 from Pharmaca
17. Earth Tu Face Eye/Repair Serum $56.00 from Spring
18. Mistine Virgin Coconut Hand & Finger Whitening Serum Oil $4.85 from eBay
19. Cocokind Facial Repair Serum, Organic - 1 fl oz $8.26 from 5+ stores
20. Mistine Virgin Coconut Hand Finger Serum Natural Whitening Softens $4.89 from eBay
အဲဒီဆေးဆိုတဲ့ ရောင်းကုန်အားလုံးဟာ ကြော်ငြာဆေးတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ Virgin ဆိုတာ အပျိုစစ်၊ လူပျိုစစ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရသလို ပစ္စည်းအစစ်လို့လည်းသုံးကြတယ်။ လေကြောင်းကုမ္ပဏီတခုလည်းရှိတယ်။ Virgin ဆံပင်ဆေး၊ Virgin အရေပြားဆေး၊ Virgin နုပျိုဆေး၊ Virgin ဘာဆေး၊ Virgin ညာဆေး အများကြီးရှိတယ်။
၁။ ဆရာရှင့် မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်မအသက် ၃၇ နှစ်၊ သားဦးကိုယ်ဝန်လွယ်ထားပါတယ်။ (၄)လကျော်ပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ တပတ်လောက်ကစပြီး (ကန်တော့ပါဆရာ) စအိုဝ အပြင်ဘက်မှာ အဖုသေးသေးလေးရှိခဲ့ရာက အခု တဖြည်းဖြည်း ကြီးလာတာ လက်သန်းထိပ်လောက်ဖြစ်လာပြီး အိမ်သာသွားရင် မခံရပ်နိုင်အောင် နာနေပါတယ်။ သွေးလဲ နည်းနည်းထွက်ပါတယ်။ အဲဒါ လိပ်ခေါင်းလားဆရာ။ ရုံးမှာလဲ နာလို့ကြာကြာမထိုင်နိုင်ပါဘူး။ သောက်ဆေး၊ လိမ်းဆေးရှိရင် ညွှန်ကြားပေးပါဆရာ။
၂။ ဆရာရှင့် ကျွန်မကအသက် (၂၈) ရှိပါပြီ။ အခုကိုယ်ဝန်နဲ့ပါဆရာ။ နောက်လထဲမှာမွေးမှာပါရှင့်။ အခုကျွန်မ မနေ့ကစပြီး လိပ်ခေါင်းရောဂါ ခံစားနေရပါတယ်ဆရာ။ အဝမှာအသားစထွက်နေသလိုနဲ့ အရမ်းနာနေလို့ပါရှင့်။ အဲ့ဒါ ဘာဆေး သောက်ပြီး ဘာဆေးလိမ်းရမလဲဆိုတာ ကျေးဇူးပြုပြီးလမ်းညွှန်ပေးပါအုံးရှင့်။
လိပ်ခေါင်းက လူအတော်များများမှာရှိတယ်။ ခွဲတိုင်းလဲ မကောင်းတတ်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် ပိုဆိုးလာတတ်တယ်။ ရိုးရိုးလမ်းကနေ မီးဖွါးနေတုံးမှာ ပိုရောင်လာသေးတယ်။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ နာတာနဲ့ သွေးခြည်ဥလို ဖြစ်ရင်တော့ အထဲမှာ သွေးခဲပိတ်နေလို့။ တချို့ကို ချက်ချင်းခွဲရတယ်။ ခွဲတာနဲ့ နာတာသက်သာတယ်။ လိပ်ခေါင်းအကြောင်း စာ ၁ ပုဒ်ပို့မယ်။ ရေနွေးသုံးတာ၊ ရေနွေးထဲထိုင်တာကို သုံးပါ။ ဝမ်းပျော့အောင်လုပ်ပါ။ MOM ကို အကြာကြီးမသောက်ပါနဲ့။
အရင်ဆုံး ဆရာဝန်မလိုတဲ့နည်းတွေ ပြောပါရစေ။ ဆေးဆိုင်တွေမှာ အလွယ်ဝယ်ရတဲ့ Corticosteroid (စတီရွိုက်) ပါတဲ့ လိမ်းဆေး (ခရင်မ်) တွေက နာတာ၊ ရောင်တာတာကို သက်သာစေမယ်။ Lidocaine ပါတဲ့ (ခရင်မ်) ဆိုတာ ထုံဆေးဖြစ်လို့ အနာသက်သာစေမယ်။ Witch hazel ဆိုတာ ယားနေတာကို သက်သာစေမယ်။ အတွင်းခံကို (ကော်တွန်) ကိုသာ ဝတ်ဆင်ပါ။ ရေမွှေးပါတဲ့၊ အရောင်တွေလဲ လှအောင်လုပ်ထားတဲ့ ရေအိမ်သုံးစက္ကူမျိုး မသုံးပါနဲ့။ Baby wipes ကလေးငယ်လေးတွေအတွက် ထုတ်လုပ်တာမျိုးက သက်သာမယ်။ ရေကိုသာ သုံးတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ စအိုအဝကို မကုပ်မိပါစေနဲ့။
ဖိုင်ဘာများ အစားအစာတွေ များများစားပါ။ Fiber ဆိုတာ အပင်တွေကရတယ်။ သစ်သီးဝလံ၊ ဟင်းသီးဟင်ရွက်။ အမေရိကန် အာဟာရအသင်းကနေညွှန်တာက တနေ့မှာ ယောက်ျား 38 grams နဲ့ မိန်းမ 25 grams စားသင့်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ Psyllium (Metamucil) နဲ့ Methylcellulose (Citrucel) တွေက ဝမ်းပျော့ဆေးတွေ ဖြစ်တယ်။ အမှန်က Fiber supplement (ဖိုင်ဘာ) အပိုဆောင်းပေးတာ ဖြစ်တယ်။ တနေ့ကို ရေ-အရည် (အရက် မဟုတ်တာ) ၈ အောင်စခွက်နဲ့ ၈ ခွက်သောက်ပါ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု လုပ်ပေးပါ။ ဝမ်းသွားရင် မညှစ်ပါနဲ့။
အတွင်းလိပ်ခေါင်း ထွက်ကျနေရင် အသာအယာ ဖိအားတညီထဲထား သွင်းပေးပါ။ ပြန်မဝင်တဲ့ လိပ်ခေါင်းဟာ ပိုးဝင်တာနဲ့ သွေးမလျှောက်တာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ သွေးခဲပိတ် လိပ်ခေါင်းဖြစ်လာရင် နာမယ်။ ထွက်နေတာကို ပြန်သွင်းလို့ မရဘူး။ ကောင်းကောင်း မထိုင်နိုင်ဘူး။ ထုံဆေးပေးပြီး ခွဲရမယ်။ ချက်ချင်းပျောက်ပါတယ်။
၂။ Kegel Exercises ကီဂယ်လ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
၃။ Sleep Pattern အိပ်က်ခြင်းစနစ်ကျပါစေ။ (တဖက်ဖက် စောင်းအိပ်ပါ။)
၄။ Take Short Breaks ခဏတဖြုတ်နားပေးပါ။ အလုပ်လုပ်နေရူဖြစ်ရင်လည်း မကြာမကြာ အနေအထိုင်ပုံစံပြောင်းပါ။
၅။ Ease Bowel Pressure ဝမ်းသွားချိန်မှာ မညှစ်ရအောင်လုပ်ပါ။
၆။ Clean Hygiene တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး ဂရုစိုက်ပါ။
၇။ A Warm Bath ရေနွေးနဲ့ ရေချိုးပါ။
၈။ Topical Treatments လိပ်ခေါင်းနေရာသုံးဆေး (ရေခဲတင်၊ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့လိမ်းဆေး-အနာသက်သာဆေး)။
၉။ Pillow Comfort ထိုင်ရင် နူးညံ့တဲ့ အခုခအခံပေါ်မှာထိုင်ပါ။
၁ဝ။ Mineral Oil ပါရာဖင်ဆီ တဇွန်းညမှာသောက်ပါ။
ရေခပ်နွေးနွေးထဲမှာ တင်ပါးမြုပ်အောင် စိမ်ထားပြီး ထိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်အခေါ်က Sitzbad ဂျာမန်စကား ကနေလာတယ်။ ရေချိုးတာပါဘဲ။ Hip-bath လို့ ခေါ်ရင် တန်းသိစေနိုင်တယ်။ စအိုနေရာမှာ တခုခုဖြစ်ရင် ဒီ ရေနွေးထိုင်နည်းကို ညွှန်းတယ်။ သက်သာတာ အမှန်ဖြစ်တယ်။ ကုန်ကျစရိတ်လဲ မရှိဘူး။ လိပ်ခေါင်း၊ ဂရင်ဂျီနာ၊ အစာဟောင်းလမ်း ခွဲစိတ်ကုသရခြင်း၊ ကလေးဖွါးတဲ့အခါ မွေးလမ်းချဲ့ပြီး ပြန်ချုပ်ထားခြင်း၊ သားအိမ် နာခြင်း၊ အစာလမ်းရောင်ရောဂါ၊ ဆီးအိမ်ရောင်ခြင်း၊ ဆီးကျိတ်ရောင်ခြင်း နဲ့ ဗဂျိုင်းနာ;ရောင်ခြင်းတွေအတွက်သုံးနိုင်တယ်။ နာတာရော ရောင်တာကိုပါ သက်သာစေမယ်။
ရေချိုးစည်ဖြစ်ဖြစ်၊ ရေထည့်လို့ရတဲ့ ကန်ခပ်ကြီးကြီးဖြစ်ဖြစ်၊ သုံးနိုင်တယ်။ ပလပ်စတစ်ရေကန် ဝယ်လို့ရတယ်။ ရေအိမ်သာ အထက်မှာထားပြီး ထိုင်နိုင်တယ်။ ရေထဲကို ဆား၊ မုန့်လုပ်ဆော်ဒါ၊ ဗနီဂါတွေလဲ ရောနိုင်တယ်။ ဘာမှမရောလဲ ရပါတယ်။ ရေကန်ထဲမှာ ရေအမြင့် ၃-၄ လက္မရှိအောင်ဖြည့်ပါ။ ရေအပူချိန် 110 °F (43 °C) ရှိသင့်တယ်။ အဲဒီထဲမှာ တင်ပါး နစ်နေအောင်ထားပြီး ၁၅-၂ဝ မိနစ်ကြာ ထိုင်နေယုံသာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ရေနွေးနည်းရော ရေအေးနည်းပါ ၂ မျိုးရှိတယ်။ Cool sitz baths အအေးထိုင်နည်းကိုတော့ Constipation ဝမ်းချုပ်သူတွေ၊ ဗဂျိုင်းနား ပိုးဝင်လို့ရောင်နေသူတွေ သုံးသင့်တယ်။ တခါတလေ ဝမ်းမလုံသူ၊ ဆီးမလုံသူတွေအတွက်လဲ အကျိုးရှိစေတယ်။ အဆန်းထွင်နိုင်တာက ရေနွေးထဲမှာ ၃-၄ မိနစ်ထိုင်၊ နောက် ရေအေးထဲမှာ တခါထိုင်၊ တလှည်စီ ၄-၅ ကြိမ် လုပ်တယ်။ နည်းတခုက ရေ ၂ မျိုး သုံးအနေရအောင် ရေအေးတဘက်သုံးနိုင်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ အဖြူဆင်းနေချိန်မယ် ရေနွေးထဲမှာ ဆားဖြစ်ဖြစ် ဗနီဂါဖြစ်ဖြစ်ထည့်ပြီးထိုင်တာ ပိုကောင်းစေတယ်။ သတိထားစရာတွေက မရှိသလောက်ပါ။ အပူရှိန်ကြောင့် သွေးပိုလျှောက်ပြီး နှလုံးခုန် နည်းနည်းမြန်နိုင်တယ်။ ပြီးရင် ခြည်တဘက်နဲ့ ခြောက်အောင်သုတ်ပါ။ တနေ့မှာ ၁-၂ ခါလုပ်သင့်တယ်။
ကျွန်တော့်ပုံတွေနဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်တခုရှိကြောင်း အခုပဲ မေးတဲ့သူရှိလို့ သိလာရပါတယ်။ မေးတဲ့သူကို အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Pf Soesan ဆရာ ဒီအကောင့်က ဆရာ့ဟာ မဟုတ်ဘူးထင်တယ် ကြည့်ကြည့်ပါဦး
ပေးတဲ့လင့်ကိုဖွင့်တော့ ထူးဆန်းအံ့သြစရာတွေနဲ့ စိတ်မချမ်းသာစရာ အော့နှလုံးနာစရာတွေ တွေ့ပါတော့တယ်။ ပရိုဖိုင်းလ်ပုံမှာ ကျွန်တော်နဲ့ မြေးတယောက်ပုံတင်ထားတယ်။ ကျွန်တော့်ပုံကို အရင်ဆုံးသုံးခဲ့တာက Lim Song Ping updated his profile picture. February 20 · နေ့ကဖြစ်နေတယ်။
ပို့စ်တွေအများစုမှာ ကျွန်တော့်ပုံတွေပါတယ်။ အဆိုးဆုံးက ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုကလစ်တွေပါနေတယ်။
သူ့ About မှာ သေချာတော့ရေးထားတာတွေ့တယ်။
Lim Song Ping
ကျွန်တော်ပုံတွေ သံးထာတာတွေက သိရသလောက် -
၁။ Lim Song Ping updated his profile picture. October 23 at 11:49am · Image may contain: 1 person , sunglasses, outdoor and closeup
၂။ Lim Song Ping updated his profile picture. October7at 11:56pm ·
၃။ Lim Song Ping updated his cover photo. August 23 ·
၄။ Lim Song Ping feeling lonely at Ipoh city. In Malaysia. May 15 · Ipoh, Malaysia ·
၅။ Lim Song Ping updated his profile picture. March 25 ·
၆။ Lim Song Ping updated his profile picture. March 1 ·
အဲတာကို ဘယ်လိုရှင်းရမလဲ မသိသေးပါ။ အဲဒီဖေ့စ်ဘွတ်နဲ့ ကျွန်တော် မသက်ဆိုင်ပါကြောင်း အသိပေးပါတယ်။
ည (မနက်) ၁ နာရီ ၄၇ မိနစ်
ချီးကျူးသည်နှင့် ခြီးကျူးသည် ဘယ်ဟာကမှန်ပါသလဲ။
ချီး = ဝှဲချီးသည်။ ချီး (မစင်)။
ခြီး = ခြီးမြှင့်သည်။ ခြီးမြှောက်သည်။ ကောင်းခြီးပေးသည်။ အံ့ခြီးဘွယ်ရာ။ ခြီးမွမ်းသည်။ ခြီးကြူးသည်။
ခြည်း = ရုတ်ခြည်း၊
ချည်း = လက်ချည်းသက်သက်။ သူ့ချည်းသာ။ ကောင်းတာချည်းဖြစ်သည်။ ဤသို့ချည်းသာဖြစ်သည်။ အချည်းအနှီး။
ဦးဖိုးလတ်​ ​ရေးထားတဲ့ မြန်​မာအဘိဓာန်​ ဋီကာ ကျမ်းမှာ​တော့ ဒီလို ​ရေးထား​တယ်​
ကြေ = မုန့်မုန့်ညက်ညက်ကြေ၊ အစာကြေ၊ ကြေပြုန်း၊ ကြေမွ၊ ကမ္ဘာကြေသော်လည်း ဥဒါန်းမကျေ၊ စိစိညက်ညက်ကြေ၊ တွန့်ကြေ၊ ထောင်းထောင်းကြေ၊ ဖွတ်ဖွတ်ကြေ၊ မွမွကြေ၊ အတွင်းကြေကြေ၊ ကြေကွဲဝမ်းနည်း၊ အညာအကြေ၊
ကျေ = ကြွေးကျေ၊ ကျေရာကြေကြောင်း၊ တာဝန်ကျေ၊ ကျေချမ်း၊ ကျေညက်၊ ကျေနပ်၊ ကျေညာသည်၊ ကျေပျောက်၊ ကျေပွန် (ကျေပြွန်)၊ ကျေလည်၊ ကျေအေး၊ ကျိန်းကျေ၊ ကျမ်းကျေ၊ စာကျေ၊ စိတ်ကျေ၊ စိတ်မကျေပွဲ၊ တာဝန်ကျေ၊ ဒဏ်ကျေဆေး၊ နောကျေ၊ ပဲတင်းပဲကျေ၊ ပျက်ကျေ၊ မင်းတိုင်းကျေ၊ လောကွတ်ကျေ၊ ဝတ်ကျေတမ်းကျေ၊ သေကျေ၊ အခဲမကျေ၊ အသုံးလုံးကျေ၊ အောက်သက်ကျေ။
ကြော် = ကြော်ငြာစာ၊ ကြွေးကြော်သည်၊ မုံ့ဆီကြော်၊ ကြော်လှော်၊
ကျော် = ကျော်စော၊ ကျူးကျော်၊ ခုန်ကျော်၊ ကျော်ဇေယျ၊ ကျော်ထင်နော်ရထာ၊ တကျော်ကျော်ခေါ်၊
မင်္ဂလာပါဆရာ ကျွန်တော့အမေက ထမင်းစားပြီး ဗိုက်တင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ နဲနဲစားလဲတင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ ခြက်ရဲ့အောက်ပိုင်းလည်းတင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ အစာအိမ်လည်းနာတယ်လို့ပြောတယ်။ အာထာစောင်းရိုက်တော့ အသည်းမှာအဆီဖုံးတယ်လို့ပြောတယ်။ အစားအသောက်နဲ့ဘယ်လိုဆက်လုပ်စင်ချင်ရပါသလဲဆရာ။ ကျေးဆူးပြုပြီး ဖြေပေးပါဆရာ။ ECG ဆွဲကြည့်တော့ နလုံးသွေးကြောကျဉ်းလည်းရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆရာ။
ဖြစ်တဲ့သူ အသက် မသိပါ။ ရေးတဲ့သူ သတ်ပုံတွေ အတော်လွဲမှားတောတော့ သိတယ်။
ခြက် = ချက်
အာထာစောင်း = အာထွာဆောင်း
စင်ချင် = ဆင်ခြင်
ကျေးဆူးပြုပြီး = ကျေးဇူးပြုပြီး
ကျေး = ကျေးရွာ၊ ကျေးလက်တောရွာ၊ ကျေးဇူးတရား၊ ကျေးကျွန်၊ ကျေးငှက်၊ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့၊ ကျေးသား။
ကြေး = ငွေကြေးဥစ္စာ၊ ငါးအကြေးခွံ၊ ကြေးနီ၊ ကြေးဝါ၊ ကြေးစည်၊ မှန်ကြေးမုံ၊ အညစ်အကြေး၊ ကြေးညှော်၊ ကြေးစားမ၊ ကြေးရတတ်။
ဆူး = ဆူးစူးသည်၊ ဆူးပုပ်ပင်၊ ကျောက်ဆူး၊ ဆူးခြုံ။
ဇူး = ကျေးဇူး၊
ဆရာရှင့် သမီးညီမက ၁ဝ လပိုင်းမွေးမှာပါ။ ဆရာဝန်ကဒီဆေးရှာခိုင်းပါတယ်ရှင့်။ ရှားတယ်လို့လည်း ပြောလိုက်ပါတယ်တဲ့ဆရာ။ အဲ့ဆေး ဘယ်မှာရှာလို့ရနိုင်မလဲရှင့်။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေရှင်။
Cefaclor ဆေးဟာ Cephalosporin antibiotics ဆေးအုပ်စုဝင်ဆေးဖြစ်တယ်။ ဗက်တီးရီးယားသေဆေးဖြစ်တယ်။ နူမိုးနီးယား၊ အသက်ရှူလမ်းရောင်တာ၊ အရေပြား။ နား၊ လည်ချောင်း။ အာသီးနဲ့ ဆီးလမ်းပိုးဝင်တာတွေမှာသုံးတယ်။
တနေ့ ၂-၃ ကြိမ်ပေးတယ်။ ၇-၁ဝ ရက်ကြာပေးတယ်။
ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုတွေကတော့ ဝမ်းပျက်။ ပျို့၊ အန်၊ ဗိုက်အောင့်၊ ခေါင်းကိုက်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။
- တောင်ယမားနဲ့ မြောက်ယမားကြားမှာ၊
- နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ စနစ်ပေါင်းများစွာ၊
- ခြေရာပေါင်းများစွာ၊ ဘီးရာပေါင်းများစွာ၊
- လူးလာခေါက်ပေါင်းများစွာ၊ လူနာအယောက်ပေါင်းများစွာ၊
- အသည်းပေါင်များစွာ၊ မဲပေါင်းများစွာ၊
- အဝေးမိုင်ပေါင်းများစွာ၊ အတွေးတိုင်ပေါင်းများစွာ၊
- ယမားများစွာ မြစ်များစွာ၊ နှစ်များစွာ၊
- စနစ် တခုတည်းသာ၊ နှစ်များစွာ။
ပုံ = စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ပုလဲမြို့နယ်၊ တောင်ယမားကမ်းဘေးက မင်းရွာ